ခုတုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ခုတုံး
Posted by ashinindaka on Feb 5, 2011 in Buddhism | 12 comments
အသောကမင်းကြီး နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သာသနာရောက်ရှိပြန့်ပွါးအောင်
ကိုးတိုင်းကိုးဌာနထဲမှာ ရှင်သောဏနဲ့ ရှင်ဥတ္တရမထေရ်တို့က
သုဝဏ္ဏဘူမိအရပ်ကို သာသနာပြုကြွရကြောင်း အရင်ပြောပြခဲ့တယ်။
သမိုင်းသုတေသီတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံဒေသဟာလဲ
သုဝဏ္ဏဘူမိထဲမှာ အကျုံးဝင်တယ်လို့ ယူဆပြောဆိုကြတယ်။
အသောကမင်းလက်ထက် (ဘီစီ ၂၃၅) ခန့်က မြန်မာပြည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဒါပေမဲ့ တချို့က ဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ဖူးကြောင်း၊
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ
ညနေတိုင်း အညောင်းပြေ တက်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးတောင်ကို သတိရမိတယ်။
လူလည်ကျပြီး ဖန်တီးထားတာလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ရိုသေစွာလျှောက်တင် မေးမြန်းအပ်ပါသည် အရှင်သူမြတ်ဘုရား
ကြပ်ပြေးနေပြည်တော် အသို့ သဘောရှိပါသနည်း ဘုရား
ရဟန်း၏ ဝိနည်းအရ အဖြေကြပ်နေသည်ရှိသော်
ဘဒ္ဒ န္တ ကြောင်ကြီး၏ အရာဟု မှတ်ယူပါမည်ဘုရား။
ကဲ၊ ဒကာကြောင်ကြီး ဖြေပေတော့။
အရှင်ဘုရား ပြောတာကို သဘောတူပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ နေမျိုးနေနွယ် သာကီဝင်မင်းမျိုတွေ၊ ဘုန်းရှင်ကံရှင် မင်းဧကရာဇ်တွေလို့ နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စစ်သင်္ဘောတွေ မန္တလေးရောက်ချိန်ထိ ထင်နေသေးတာလေ။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတဲ့ သာသနာပြုဘုရင်ဆိုရင် ပြုတ်တော့မဲ့တိုင်းပြည် သွားအုပ်ချုပ်မယ်မထင်ပါဘူး
ဒကာကိုအောင်ပုရဲ့မေးခွန်းကို ဘဒ္ဒ န္တ ကြောင်ကြီး မြန်မာပြည်ကြွရန်ရှိသေးသမို့ ဖြေရန်ခက်သေးသကွဲ့။ ပြန်လာမှ အဖြေပေးလို့ရဖူးလား။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲ တခါမှ မကြွလာဖူးဘူး။ လူသားဘု၇ားဟာ .. သာသနာပြုတာမှာ လမ်းလျှောက်ပြုရတာမို့ဗုဒ္ဓဂါယာေ၇ာက်ဖူးတဲ့သူတိုင်း ..ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ခက်ခက်ခဲခဲ သာသနာပြုခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိသာတယ်..။ အဲဒီခေတ်က လူသားတယောက်ကျင်လည်နိုင်တာက ..တဘ၀စာမှာ ..မိုင်၅၀ အ၀န်းထက် မပိုနိုင်ဘူး..။ ဒီတော့….
ရွေစက်တော်ရော။ မန္တလေးရော။ ရခိုင်မှာ မဟာမြတ်မုနိ ဆင်းတုထုတော့ ကိုယ်ငွေ့လှုံပေးခဲ့တယ်ပြောတာရော. ..အကုန် ဘုရင်တွေ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူထုကိုမှိုင်းတိုက်ပြီး ပြောသွားရေးသွားတာချည်းပဲ..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ခိုးထွားတယ်ထင်တဲ့ ဘုရင်တိုင်းဟာ.. မြို့ သစ်တည်တယ်။ စေတီတည်တယ်။ ဆင်ဖြူရှာတယ်..။
ဘုရင်ခေတ်ကုန်လည်း ..ဘုရင်ရူးတဲ့သူတွေ နိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်ရင် အဲဒီစိတ္တဇကို အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတယ်..။
ဦးနုက .. ကမ္ဘာအေးစေတီတယ်တယ်…။ ဦးနေ၀င်းက မဟာဝိဇယစေတီတည်တယ်..။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေက သူများထက်ထူးပြချင်တာမို့ .. မြို့ သစ် နေပြည်တော်ကိုတည်တယ်.။ ဆင်ဖြူပါရအောင်ရှာတယ်..။ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတယ်တယ်..။
သဂျီးမင်းပြောတာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ နောင်တချိန်ကြမှ ရွာထဲ virtual pagoda တည်မလို အလှူခံရင် နာဖို့သာပြင်။
လဲသေလောက်အောင်ကို ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာပဲ..။
တကယ်တော့ ..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲ ဗစ်တူစ်ရယ်စေတီ အဆူဆူ … တည်ပြီးသားပါ..။ ဂေါတမဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုလည်း ..စိတ်ထဲရည်မှန်းထုဆစ်ထားပြီးသား..။
ဒီအိုင်ဒီယာကို .. သေသေချာချာ တခုခုလက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်..။
ဗစ်တုရယ်စေတီ(စိတ်ငွေ့စေတီ)ရှိရင်… လူတွေလည်း ..အင်တာနက်ကနေ… သက်သက်သာသာ ဘုရားဖူးလာလည်လို့… ရတာပေါ့..။
မွေးနေ့..ဘာနေ့ညာနေ့..အထိမ်းအမှတ်… ရွှေပြားတင်မက ..စိန်ပြားပါကပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးဦးမှာ…။ လုပ်ပေးဦးမှာ..
ငွေတွေကတော့ .. တကယ်လှူရလိမ့်မယ်..။ အဲဒီငွေတွေတကယ် ရကြောင်း. ဆာတီဖကိတ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်လေ…။
ဒါပေမဲ့.. အဲဒီငွေတွေကို … လူတွေတိုက်ရိုက်အကျိုး၇ှိတဲ့.. ဆေးရုံ၊ ကျောင်း တွေပြန်လှူပေးလိုက်မယ်..။
ဒါဆို သဂျီးတည်မဲ့ဘုရား ဂေါပကလူကြီးနေရာ အခုထဲက လျောက်ထားပါရစေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘဏ္ဍထိန်းရာထူး လိုခြင်ပါတယ်။
တဂျီးပြောတာမှန်တယ် ဘုရင်တွေနဲ့ ဘုရင်ရူးတွေအားလုံးက သူတို့လုပ်ချင်တာကို သမိုင်းလို့ ပုံသွင်းပြီးတော့ တကယ့်သမိုင်းကိုတော့ ပုံပြင်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်
၁၀တန်းတုန်းက သချာင်္ဆရာ ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီး တူမ ဂေါပက သား ညားတဲ့ အခါ အလွန်ရစ်တယ် ဆိုလား ဘာအလုပ်လုပ်မှ မလုပ်ဘဲ ညာဝါးတယ် ဆိုတာမျိုး ပြောချင်တာလေး သတိရမိတယ်။